बदलिएका विजय ! - Khelpati
बदलिएका विजय !
बुधवार, भदौ २५, २०७६ रमेश सुवेदी
काठमाडौं । एन्फा एकेडेमीका पहिलो ब्याजका खेलाडी हुन्, विजय गुरुङ ।
फुटबल संघले पहिलो पटक विजय सहित ४० खेलाडी समावेश गर्दैै एन्फा एकेडेमीको सुरुवात गरेको थियो ।
पहिलो ब्याजका धेरै खेलाडी फुटबल छाडिसके । कोही समाजसेवामा लागे, कोही व्यवसाय गरेर बसेका छन्, कोही भने प्रशिक्षकको रुपमा अगाडी बढेका छन् ।
तर विजय भने अझै पनि फुटबलमा रमाईरहेका छन् । फुटबलनै खेलिरहेका छन् । पहिलो ब्याजबाट खेलाडीको रुपमा सक्रिय विजय एक्ला खेलाडी हुन भन्दा फरक पर्दैन ।
उनका समकक्षी धेरैले फुटबल करियर छाडिसके । विजय अझै खेलाडीको रुपमा मैदानमा सक्रिय छन् ।
करिब ५ बर्षको अन्तरालमा गत बर्ष सहिद स्मारक ए डिभिजन लिग आयोजना भयो । विजय एकाएक हराए । ए डिभिजन लिगका कुनै क्लबमा उनी देखिएनन् ।
धेरैको अनुमान थियो, उनी पनि पलायन भए । सायद फुटबल छाडे ।
तर वास्तविकता फरक रहेछ । घर्कदो उमेरसंगै उनी व्यवसायमा ब्यस्त रहेछन् ।
रेलिगेशन बिनाको लिगको खासै अर्थ पनि थिएन । उनले चाहेको क्लब पनि पाएनन् । अनी उनले लिग नखेल्ने निर्णय लिए ।
तर उनले फुटबल छाड्न कहाँ सक्थे र ?
बढ्दो उमेरसंगै खेल विस्तारै सुस्ताउन थालेको थियो । तर मन भने मैदानमा अडिरहन्थ्यो ।
अनि उनी फुटसल खेलेर फुटबलको प्यास मेट्ने गर्दथे । ज्यानलाई फिट राख्न फुटसलमा रमाउने बानी विजयलाई परेको थियो ।
नेपालले इरानमा आयोजना हुने एएफसी फुटसल च्याम्पियनसिप छनोट खेल्ने तय भयो । त्यसकालागि एन्फाले खेलाडीको छनोट खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट गर्ने निर्णय गर्यो । जसमा विजय समेत सहभागी भए ।
विजयले राष्ट्रिय फुटबल टिमबाट आधिकारिक रुपमा सन्यासको घोषणा गरिसकेका छैनन् । तर उनले राष्ट्रिय टिममा आफु उपलब्ध हुन नसक्ने भनेर एन्फालाई बताईसकेका छन् ।
उनै विजय अहिले राष्ट्रिय फुटसल टिममा पर्न प्रयासरत छन् ।
कुनै समय राष्ट्रिय फुटबल टिमका स्टार खेलाडी विजय फेरी फुटसलमा छाउने प्रयासमा छन् । ‘राष्ट्रिय टिमबाट धेरै खेले । अव फुटसलमा नयाँ अनुभव लिन आएको छु । गृहजिल्लामा रहँदा फुटसल खेल्ने गर्थे । केहि गर्न सक्छु भनेर आएको हुँ ।’ विजयले खेलपाटीसंग भने ।
‘यो फाष्ट गेम हो । त्यो क्षमता मसँग छ र खेल्न सक्छु भनेरनै फुटसलमा आएको हुँ । सुरुवातनै टिममा पर्छु भन्नेमा विश्वस्त थिए ।’ राष्ट्रिय फुटसल टिमको प्रारम्भिक टोलीमा छनोट भएका विजय भन्छन् ।
फुटसल कमिटिले १ सय २० खेलाडीबाट प्रारम्भिक ४७ खेलाडीलाई टिममा बोलाएको थियो । विजय पनि टिममा पर्न सफल भए । अहिले २५ सदस्यीय टोलीले आन्तरिक प्रशिक्षण गरिरहेको छ ।
मुख्य प्रशिक्षक विष्णु गुरुङले अन्तिम १४ सदस्यीय खेलाडी छनोट गर्ने तयारी गरको छन् । विजय टिममा पर्ने एउटै लक्ष्य लिएर अभ्यास गरिरहेका छन् ।
विजय धेरैपछि काठमाडौंमा बसेर फुटसलको प्रशिक्षणमा सहभागी छन् । उनको दैनिकी फुटसलमा बितिरहेको छ ।
‘सय बढी खेलाडीबाट यहाँसम्म आईपुगको छु । टिममा पर्छु जस्तो लाग्छ । फुटसलबाट देशको लागि केहि गर्न सक्छु भनेर आएको हुँ ।’ उनले भने ।
साउथ तथा सेन्ट्रर जोनमा रहेको नेपाल समूह ए मा रहेको छ । नेपाललेको समूहमा बलियो उज्वेकिस्तान, ताजकिस्तान र अफगानिस्तान रहेका छन् । समूहको शिर्ष एक फाइनल चरणमा प्रवेश गर्नेछ ।
नेपालले कात्तिक ६ गते ताजकिस्तानसँग खेल्दै प्रतियोगिताको सुरुवात गर्नेछ । ७ गते उज्वेकिस्तान र ८ गते अफगानिस्तानको सामना गर्नेछ ।
गत बर्षको लिगमा उनले थ्रीस्टारबाट खेल्ने सोच बनाएका थिए । तर क्लबले कुनै चासो देखाएन । विजयले अन्य क्लबबाट खेल्ने सोच बनाएनन् ।
हुन त उनी फुटबलबाट दिक्क भैसकेको थिए ।
२०७२ सालको राष्ट्रिय लिगमा थ्रीस्टारलाई च्याम्पियन बनाउँदा अन्तिम खेलका म्यान अफ दि म्याच विजय भन्छन्, ‘खेलाडीलाई खेलेर खान गाह्रो छ । कति खेर के हुन्छ थाहाँ हुँदैन । राम्रो खेल्दा सबैको नजरमा परिन्छ । त्यसपछि कसैले वास्ता गर्दैन । लामो समय न लिग भयो, न राम्रो प्रतियोगिता । त्यसैले फुटबल भन्दा व्यवसायमा लाग्न उचित ठाने ।’
‘फुटबल मात्रै खेलेर खान नपुग्ने रहेछ । त्यसैले बाहिर पनि केहि गर्नुपर्छ । सोही कारण अहिले फुटबलबाट टाढानै छु । फुटबल गतिविधि के हुन्छ थाहा हुँदैन । अहिले राष्ट्रिय टिमका कति खेलाडीलाई त चिन्ननै गाह्रो लाग्छ ।’ विजयले भन्छन् ।
विजयमाथि लागेको अनुशासनको कारबाही यथावत छ । अघिल्लो कार्यसमितिले उनलाई अनुशासनको कारबाही गरेको थियो । सोही कारण उनले कोचिङ कोर्ष समेत गर्न पाएनन् ।
प्रशिक्षक ज्याक स्टोफोनिस्कीको समयान विजयले अन्तिम खेल खेल्दै राष्ट्रिय टिमबाट बाहिरिने सोच बनाएका थिए । तर उनी टिममा पर्न असफल भए ।
मोफसलमा राम्रो प्रदर्शन गरेपछि ज्याकले पुन उनलाई टिममा बोलाएका थिए । तर विजयले नजाने निर्णय गरे ।
‘मैले राष्ट्रिय टिमबाट अन्तिम खेल खेल्ने भनेको थिए । मलाई हटाईयो । पछाडी बोलाउँदा म आफै गईन । अनि मलाई कारबाही गरेको थाहा पाए ।’ विजय भन्छन् ।
फुटबल छाड्ने निर्णय लगत्तै उनले कोचिङ कोर्सका लागि निवेदन दिएका थिए । तर विजयको नाम निस्किएन । उनी अचम्मित भए । एन्फामा बुझे । अन्तिममा कारबाहीमा परेको खबर पाए । त्यसपछि विजयीलाई एन्फाको ढोका बन्द छ ।
फुटबल संघमा नयाँ नेतृत्व आएपछि पनि उनी एन्फा गएका छैनन् । तर पदाधिकारीसँग कोचिङ कोर्षका लागि अनुरोध गरेका छन् । उनी एन्फाको निर्णयको पर्खाईमा छन् । विजय पनि जुमानु राई, भोला सिलवाल, सन्तोष साहुखल जस्तै एन्फाबाट सुखद् विदाई चाहन्छन् ।
विजयले पछिल्लो समय विदेश पलायन हुने समेत नसोचेका हैनन । तर काठमाडौं फर्किएपछि उनको सोच बदलिएको छ । उनी इरानमा आयोजना हुने एएफसी फुटसल च्याम्पियनसिपमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्न चाहन्छन् अनि एन्फाबाट कोचिङ कोर्ष गरेर फुटबल करियरको नयाँ ईनिङ्स सुरु गर्न चाहन्छन् ।